အချစ်အတွက် အလိုအပ်ဆုံး – Grab Love Story
ကျနော် သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဘာမျှ ပြန်မပြောမိတော့..။ ချစ်သော ညိုသီ ကျနော့်အပေါ်၌ အထင် အလွဲကြီး လွဲသွားပြန်ပြီမို့…စိတ်ထဲ၌ တင်းကြပ်မွန်းနစ်နေသည်..။
တဆစ်ဆစ် နာကျင်လွန်းသော နှလုံးသားမှ ဝေဒနာကို ကျနော် ဘယ်ပုံ ကုစားရပါမည်နည်း..။ စိတ်ထဲမှာ…အားလုံး ဝေဝါးနေဆဲ…။
“ ညိုသီ.. ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိနေတယ်.. ရဲလင်း..သီဟက သူ့အဒေါ်တစ်ယောက်နဲ့ ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို လုပ်ခိုင်းထားတယ်..တဲ့… ”
“ မင်း..သတင်းက ဘယ်ရပ်ကွက် ကလဲ..”
ဆေးပေါ့လိပ်ကို အဝေးသို့ လွှင့်ပစ်ရင်း စန်းလွင်က မေးသည်.။
“ ဟဲဟဲ…မင်းတို့က ငါ့ကို အထင်သေးကြတာကိုး… ကွ.. ဟဲဟဲ..မမနွယ်နဲ့ ညိုသီ့အဒေါ်က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ကွ….၊ ငါက ညိုသီနဲ့ ရဲလင်း ပြဿနာကို ပြောပြလို့ မမနွယ် .. စိတ်မကောင်းဘူး.. ညိုသီ့အဒေါ်ကလဲ ခုမှ နှစ်ဆယ့်ခုနစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတာဟ…အပျိုပဲ.. ဒီတော့ စန်းလွင် အဲဒါ.. မင်းအပိုင်း..”
“ ဟေ့ကောင် .. အရူးမထနဲ့ … ပြဿနာက မရှင်းပဲ ပိုပြီး ရှုပ်လာမှ .. ဒုက္ခတွေတသီကြီး တွေ့အုံးမယ်..”
“ ရပါတယ်.. စန်းလွင်ရာ.နောင်တော့် နောင်တော်ကြီးတွေရဲ့ သမရိုးကျ နည်းတွေ အများကြီးပါ..ဟ..ဒီမှာ မနက်ဖြန် မင်းနဲ့ငါ ဒေသကောလိပ်ထဲ သွားကြမယ်.. ”
“ ဘာလုပ်ဖို့လဲ…ကလပ်စ် ဖျက်ပြီး လစ်မှာလား..”
“ ဟာ…အရေးတကြီး အချိန်လေကွာ…ဘာလဲ မင်းက စောင်းတီးပြီး သီချင်းဆိုနေချင်သေးလို့လား… ”
သူတို့နှစ်ယောက် အချီအချ ပြောနေကြသည်ကို ကျနော် ကြားနေသော်လည်း ကျနော် စိတ်မဝင်စားပါ..။ အပြင်၌ ခပ်သဲသဲလေး ရွာနေသော မိုးဖွားလေးများကိုသာ ကျနော် ဆွေးမြေ့ ကြေကွဲစွာ ကြည့်နေမိသည်..။
“ ညီမက ကျောင်းသူထင်ပါတယ်.. ဟို..အစ်ကို့ရဲ့ ညီမတစ်ယောက် ဒီဒေသကောလိပ်မှာ တက်နေပါတယ်… သူ့နံမယ်က ဖြူနှင်းဝေတဲ့…အဲဒါ ဒီအခန်း..”
“ အို…ဒါက စာသင်ဆောင်တွေရှင့်….”
“ အော်…အစ်ကိုက .. ဟိုး မြင်းခြံဘက်က လာတာပါ.. ”
“ မိန်းကလေးဆောင်တွေက ဟိုဖက်မှာ ရှိတယ်လေ..သွားမေးကြည့်ပါလား..”
စန်းလွင် ပါးစပ်ထဲ တွေ့ကရာနာမည်တစ်လုံးကို ခုတုံးလုပ်၍ ညိုသီ့အဒေါ်နှင့် စတင် စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်..။ တစ်ရက်….အင်း…ရက်ရှည်စီမံကိန်းဆိုတော့ အတော်လေးတော့ စိတ်ရှည်ရှည် ထားရမှာပဲလေ…။
“ ဟော…ညီမ နဲ့ပဲ တွေ့ပြန်ပြီ..ဟဲ ဟဲ..”
“ အစ်ကို့ ညီမကို ရှာလို့တွေ့ပြီလား…ဟင်….”
“ တွေ့ပြီ..တွေ့ပြီ သူက ဟို စံရိပ်ငြိမ်မှာ အဆောင်ငှါးနေတာတဲ့လေ…အစ်ကို့နံမယ်က သန်းလွင်ပါ… ခုတော့ ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာပဲ အလုပ်ရပြီလေ..မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်း ကျောင်းထားရတာ စိတ်မချလို့ ညီမရေ.. အစ်ကို့ဒုက္ခကလဲ ကြီးပါ့..။ ကျောင်းတက် ကျောင်းဆင်း အလုပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်…ဒါနဲ့ ညီမ နံမယ်က..”
“ အဟင်း…ထားထားဝေပါ…အစ်ကို… ၊ ညီမလဲ..အစ်ကို့လိုပဲ တူမလေးတစ်ယောက်ကို ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို လုပ်နေရတာပါ..”
“ ကဲ.ဗျာ..၊ ဘဝတွေက တူမှတူတတ်လွန်း..ဟဲဟဲ…”
“ အင်းနော်….ဒီမှာ ကော်ဖီဗူးပါတယ်….”
“ ဟာ…အတော်ပဲ…အစ်ကို့မှာ ကိတ်တစ်လုံး ပါတယ်…အိုကေပဲ…”
နှစ်ယောက်သား ရယ်မောသံက ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ် ချုပ်ဆိုပွဲက လက်ခုပ်သံတွေထက် သာယာခဲ့တယ်ဆိုပဲ..။
“ ဟယ်…မနွယ်…ကျောင်းထဲ ဘာလာလုပ်..”
“ ကြည့်စမ်း…ထားထား..ညည်းအိမ်ထောင်ကျမှန်းတောင် မသိဘူး…အရမ်းဆိုးတာပဲ..ဘာလို့ဖိတ်စာ မပို့တာလဲ…”
“ ဒီမှာရှင့်…ကျမနဲ့ ထားထားက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ သိလား …လမ်းမှာတွေ့ရင် ကွင်းရှောင်သွားနော် …အဟင်း…သွားအုံးမယ်..ထားထားရေ..ခလေး ကင်ပွန်းတပ်မှ လာခဲ့မယ်….”
ဒါက ဒါရိုက်တာ ကျော်ဝေရဲ့ ပီပြင်သော ရိုက်ချက်..။ ထားထားဝေ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် ပါးစပ်အဟောင်းသားလေးနှင့် ..။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင် တစ်ခန်းဝင်ပါသော ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုလဲ အပီအပြင် သရုပ်ဆောင်ပြန်သည်..။
“ ဟေး…..ကိုလွင် ကြည့်စမ်း..ကျောင်းပြီးကတည်းက မင်းနဲ့ ကွဲသွားလိုက်တာ…ခု အိမ်ထောင်ကျနေပြီပေါ့လေ….မင်းတို့လင်မယားကို တွေ့မှ သတိရတယ်..။ ဟိုကောင်လေ..အောင်ဆွေကြီးလဲ ခလေးတွေတောင် ရနေပြီဟ… ဒါပေမယ့် မင်းတို့လို သူဌေးမဟုတ်တော့ မချောင်လည်ကြဘူး..သွားအုံးမယ်…ညီမကလဲ…တွေ့ရင်ခေါ်ပေါ့ကွာ….”
ဒါပဲ…ဒါရိုက်တာ မနားတမ်း ကန်သွင်းလိုက်တဲ့ဘော…ဂိုးထဲကို တန်းဝင်တာပဲ..။
“ ကျမတော့ စိတ်တောင် ညစ်လာပြီ…ကိုသန်းလွင်..ရယ်…”
ထားထားက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေးဖြင့် ပြောသောအခါ ..သန်းလွင်က တည်ကြည်ခန့်ညားသော လေသံမျိုးဖြင့် …
“ အစ်ကိုတော့ ပျော်တယ်….ထားရယ်…”
“ သူတို့ထင်သလိုသာ ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့….”
“ အစ်ကို..နော်…ဒီက ရိုးရိုးခင်တာဟာ ကို…”
“ ဟန်ဆောင်ခြင်းဟာ လိမ်လည်ခြင်းတစ်မျိုးတဲ့…”
“ အညာသားက စကားတတ်တယ်…နော်….”
“ အညာသားလဲ နှလုံးသားနဲ့ပါ…ထားရယ်….”
ဆိုပါတော့…ကျော်ဝေ ရိုက်သွင်းထားသော အကွက်ထဲသို့ ကွက်တိဝင်လာသော ထားထားတစ်ယောက်။
ထားထားဝေ အလှကို ကျနော် စာမဖွဲ့လိုပါ..။ ယောက်ျားတစ်ယောက် နှစ်ခါပြန်ကြည့်ရသော တင်ပါးကြီးများကို တော့ ကျနော်တို့ အသိအမှတ်ပြုကြရမည်ထင်သည်..။
အပျိုကြီးများစတိုင်အတိုင်း အိနြေ္ဒကြီးကတော့ ရှစ်ပိဿာခန့် အမြဲ ရွက်ထားရှာသည်.။ သို့သော် စန်းလွင်နှင့် ဆုံဆည်းလေတိုင်း ထားထားဝေ မျက်လုံးလေးများ ဝင်းဝင်းလက်နေကြသည်..။ ထာဝစဉ်လို တည်ငြိမ်နေသော ထားထားဝေတစ်ယောက် စန်းလွင်နောက်ကျလျှင် မသိမသာ ကားလမ်းဆီသို့ ငေးမောနေတတ်သည်..။ ဤသည်ကိုကြည့်ပြီး ကျနော်နှင့် ကျော်ဝေက တားဂက်ထိနေပြီဖြစ်ကြောင်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အချက်ပြ လက်မထောင်ပြလေ့ ရှိကြသည်..။
“ ဒါ…အစ်ကို့ခြံလေ…ထား…ပန်းအစုံ ရှိတယ်..အဓိက စိုက်တာက စပယ်ပန်းပါ..ဖောက်သည်တွေလည်း အမြဲလာဝယ်ကြတယ်…”
“ အစ်ကိုက သူဌေးလေးပေါ့…နော်….”
“သူဌေးကတော်လေးကလဲ…ဒီမှာ အမြဲလာနေချင် နေလေ…”
“ ဟွန်း…..သွားပါ…ရည်းစားလဲ မဖြစ်သေးပဲနဲ့….”
“ ဟာ..ဟုတ်လား…..အစ်ကိုက ဖြစ်နေပြီ ထင်တာ…”
“ အစ်ကိုခေါ်တဲ့နောက်တောင် လိုက်လာပြီပဲ ထားရယ်…..”
ကျော်ဝေမှာထားသည့်အတိုင်း စန်းလွင် လက်ကမြန်သည်..။ ထားထားကိုယ်လုံးလေးကို သိမ်းကျုံးပွေ့လိုက်သည်..။
“ ဟာ…ဟေ့အေး…အစ်ကိုရာ…အဲလိုတော့ မလုပ်နဲ့ နော်….”
“ ဆိုးတာပေါ့….လို့….သွား..ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး…..”
ထားထားက စန်းလွင်ကို တွန်းထားခဲ့ပြီး စပယ်ရုံပန်းတန်းကြားထဲ ခလေးတစ်ယောက်လို ဝင်ပြေးသည်..။ စန်းလွင်က နောက်မှ ပြေးလိုက်ရင်း ခြံထောင့်အေရာက်တွင် အမိဖမ်းလိုက်သည်..။
“ လွှတ်ကွာ…..အစ်ကို…ထားထား စိတ်ဆိုးမှာနော်…”
“ ဆိုးချင်လည်း ဆိုးတော့ ထားထားရယ်…ချစ်တယ်ကွာ….ချစ်တယ်….”
“ အာ…ဒုက္ခပါပဲ…ဟိတ်…အဲလို အနိုင်မကျင့်နဲ့နော်…ထား ငိုမှာသိလား…ဟာ…အဲဒါ ဘာလုပ်တာလဲ..လို့….”
အကြားအမြင်များစွာ သင်တန်းဆင်းထားသော စန်းလွင်လက်ကြီးများက ထားထားနို့ကြီးများကို အုပ်ကိုင်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပွတ်သပ် ဆုပ်နယ်ပေးရင်း နှုတ်ခမ်းအစုံကိုလည်း ဖိကပ်စုပ်နမ်းသည်..။ ထားထားရင်တွေ တသိမ့်သိမ့် တုန်သွားဟန်ဖြင့် ဝါးရွက်ကြွေလေးများ ကြားလဲကျသွားရှာသည်..။
စန်းလွင်ကလည်း ဆရာ့ဆရာကြီးများ သင်တန်း ဆင်းပြီးပြီ..။ တစ်ပြားသားမှ နောက်မဆုတ်ပဲ ထားထားကိုယ်လေးပေါ်မှ ဖိအုပ်ခွစီးထားကာ သူ့ဖင်ကြီးကို ထားထားပေါင်ကြားထဲသို့ သူ့လီးကြီးသွင်းပြီး အသလွတ်ကြီး ညှောင့်လေသည်..။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထားထားစိတ်ကို နှိုးဆွလိုက်ခြင်းပင်..။ မိန်းမဗီဇအတိုင်း ထားထားပေါင်ကြီးများ ကားထွက်သွားသည်..။ စန်းလွင်က တစ်ဆင့်တက်၏ ။ လုံချည်အတွင်းမှ မာတောင်နေပြီ ဖြစ်သော သူ့လီးကြီးကို ထားထားစောက်ဖုတ်လေးသို့ မှန်းပြီး ထောက်ခါ ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ …ထားထားမှာ ကာမစိတ်များ နိုးထလာပြီး စန်းလွင်ခါးကို ဒူးနှစ်ချောင်းထောင်၍ ညှပ်လိုက်လေ၏ ။
ထိုအခါမှ စန်းလွင်က ထားထားထမီအောက်စလေးကို ဂမူးရှူးထိုး ဆွဲလှန်ပစ်လိုက်လေရာ…ပေါင်လုံးကြီးများမှာ ထိကပ်မတတ်ကြီးမားနေပြီး ဖင်သားကြီးများမှာလည်း ဖြူဖွေးအိစက်စွာ…အသားချင်းထိမိလိုက်ကြလေသည်..။
နှစ်ဦးသား အသက်ရှူသံများ လှိုင်းထန်လာသည်..။ ထားထားဝေ၏ ဘဲဥပုံမျက်နှာလေးမှာ နီရဲပြီး ရှက်စိတ်ဖြင့် မျက်လုံးကို မှိတ်ထား၏ ။ စန်းလွင်က စေ့ကပ်နေသော ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ သူ့လီးပူပူနွေးနွေးကြီးကို ထိုးသွင်းကာ ညှောင့်ပေးလိုက်ရာ… ထားထားထံမှ ဖားဖိုထိုးသကဲ့သို့သော အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းကို ကျယ်လောင်စွာ ကြားလိုက်ရလေသည်..။ စန်းလွင်၏ လက်တစ်ဖက်က ထားထားနို့ကြီးများကို ဆုတ်နယ်ပေးနေသည့်နည်းတူ ကျန်လက်တစ်ဖက်က စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ဖြဲဟလျက် ထိုးမွှေပေးလိုက်လေသည်..။
“ ဟင့်……..အင်း ”
အသက်ရှူထုတ်သော အသံရှည်ရှည်လေးတစ်ချက်သာ ထားထားထံမှ ထွက်ပေါ်လာသည်..။ ကလန်ကဆန်ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း ဘာတစ်ခုမျှ မပြုရှာတော့..။ စန်းလွင်စိတ်ကြိုက်နှူးနှပ်ပြီးသွားသောအခါ ထားထားဒူးနှစ်ဖက်ကို သူ့ပေါင်ပေါ်သို့ ကန့်လန့်ဖြတ် ဆွဲတင်လိုက်သည်.။
ထိုအခါ ထားထားစောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ အပျိုစင် ပါကင်စောက်ပတ် ရနံ့လေးက ထောင်းခနဲ စန်းလွင်နှာခေါင်းဝသို့ ဝင်လာသည်..။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဖြစ်သော်လည်း ရိုးသားကြိုးစားသော စန်းလွင်အဖို့ မိန်းမစောက်ပတ်ကို ပထမဆုံးနီးကပ်စွာ မြင်ဖူးခြင်းပင်ဖြစ်ရာ…ထားထား၏ စောက်ဖုတ်ကြီးအား အသေအချာငုံ့ကြည့်ရင်းက လီးကြီးကို ကိုင်ထည့်လိုက်သည်..။
ထားထားထံမှ အသက်အောင့်လိုက်သောအသံလေး ထွက်လာကာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်း တုံရီနေသည်..။ စောင်းထားသော ခေါင်းလေးကြောင့် ဘာမှန်းမသိဘဲ ကျလာသောမျက်ရည်များက မျက်လုံးအိမ်ထောင့်မှ စီးကျလာနေပေသည်..။
“ ဘာလို့ ငိုရတာလဲ…ထားရယ်….”
“ အော်…အပျိုမလေးတွေ ရှက်ရင်လဲ ငိုတာပါပဲလား…လူကြီးတွေ ရှက်တော့ ရီတယ် ဆို…”
“ အစ်ကို လိုးမယ်နော်…ထား…..”
နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို ပူးကပ်စုချွန်ရင်း ထားထားခေါင်းငြိမ့်သည်..။ လီးနှင့်စောက်ပတ် ပထမဆုံး ထိမိကြသောအရသာကို နှစ်ယောက်စလုံး အခုမှ စတင်ခံစားဖူးကြရသည်..။
စန်းလွင်လက်က ဘော်လီအင်္ကျီထဲမှ နို့ကြီးများကို ညင်သာစွာ နှိုက်ထုတ်ယူလိုက်သည်..။ နို့ကြီးများက နေမထိ လေမထိ နှင့် ဖွေးဥနေသည်..။ သင်းချိုသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို စန်းလွင် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ဖိနမ်းပြီးမှ နို့သီးခေါင်းလေးများကို လျှာဖြင့် ကလိပေးသည်.. ။
ထားထားမှာ ဝါးရွက်ကြွေများပေါ်၌ တလူးလူးတလွန့်လွန့်ဖြင့် အဖျားတက်သလို တဟင်းဟင်းငြီးတွားနေရရှာလေသည်..။ တစ်ခါတစ်လေ… အောက်မှ ဖင်ကြီးကြွကြွတက်လာပြီး တေ့ရုံ တေ့ထားသော လီးကြီးအား လှမ်းလှမ်း ဟတ်သကဲ့သို့ ကော့ဆောင့်နေသည်..။
တိုးတိုးမှ တကယ့်တိုးတိုးလေး…ငြီးပြောလေးပြောသည်..။ သည်တော့မှ စန်းလွင်က လီးကို တစ်ထစ် လိုးသွင်းလိုက်သည်..။
လီးက ထိပ်မှာအရည်များ စိုရွှဲနေပြီး စေ့ကပ်နေသော စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကြီး အတိုင်း ချော်ထွက်သွားသည်..။
“ ကျွတ်…ဘယ်လိုမှန်း မသိဘူး…ဟင့်…ဟင့်….”
ထားထားစိတ်မရှည်စွာဖြင့် စန်းလွင်ပုခုံးကို လက်သီးဆုပ်လေးဖြင့် ထုလေသည်..။ စန်းလွင် ဒုတိယအကြိမ် သွင်းလိုက်ပြန်သည်..။
လီးကြီးကသာ ကောက်ဝင်သွားပြီး စောက်ခေါင်းထဲသို့မဝင် ။
ထားထားမှာ တစ်ကိုယ်လုံး တုံခါပြီး အနေရခက်နေပြီ ဖြစ်သည်..။ စင်စစ် စန်းလွင်မှာ အမြင်သာရှိပြီး တစ်ခါမျှ မလိုးဖူး..။ ယခု သူ ဇွတ်အတင်းလိုးထည့်နေသည်မှာ စောက်စိလေးတဝိုက်ရှိ စောက်ပတ်အထက်ပိုင်းကို လိုးသွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်..။ စန်းလွင်နဖူးတွင် ချွေးများသီးလာနေသည်..။ ထားထားမှာ အပျိုစစ်စစ်လေးဖြစ်လေရာ..တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ယခုကဲ့သို့ မခံဖူးပေရာ…။
“ အပေါက်မှမတည့်ပဲ…ကိုင်သွင်းပါလား…” … စသည်ဖြင့် ပါးစပ်မှ မထွက်ပဲ…. “ အာ..ဟာ…အဟင့်….” ဟူသော စိတ်မရှည်သံကလေးများကိုသာ ပြုနိုင်လေသည်..။ နောက်ဆုံး စန်းလွင်… စေ့ကပ်နေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးကို လက်မနှစ်ဖက်ဖြင့် ဖြဲလိုက်သည်..။
“ ပြတ်..” ကနဲ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားသည်..။ ထိုအခါမှ ရှူးပေါက်သော စောက်စိအောက်နားမှ သားအိမ်လမ်းကြောင်းရဲရဲကြီးကို တွေ့လိုက်လေသည်..။ အတွင်းသားများက ရဲရဲနီနေသော်လည်း စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီး အောက်ခြေမှ အသားအရည်မှာ သွားဖုံးသားကဲ့သို့ ခပ်မာမာ ခပ်တင်းတင်းဖြင့် အညိုရောင်သန်းသန်းလေး ဖြစ်နေသည်..။ စန်းလွင်.. စောက်ပတ်ကို သုတေသန လုပ်အပြီး၌ သူ့လီးကြီးအား အေ၇ခွံဖြဲချပြီး စောက်ခေါင်းဝသို့ တေ့ကာ လိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်..။
ကြိမ်တို့လိုက်သော နွားနှယ် ဆတ်ခနဲ တုန်သွားသည်..။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ပူထူရှိန်းဖိန်းပြီး တစ်ခါမျှ မကြုံဖူးသေးသော ကာမအရသာကို စတင်ခံစားလိုက်ရလေသည်..။
စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကြီးဝင်လိုက်သည်နှင့် ထားထားတစ်ကိုယ်လုံးရှိ ကြွက်သားများ တင်းကနဲ ကျစ်မာသွားကြသည်..။ ပူပူနွေးနွေးကြီး ဝင်လာသော လီးကြီးအရသာမှာလည်း စွဲမက်စဖွယ် ချိုအီသောအရသာကို ပေးစွမ်းနေသည်..။ တကယ်ဆို စန်းလွင်သည် ဒေါင်ကောင်းပြီး ကြွက်သားအဖုအထစ်များဖြင့် ခန့်ညားသော ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လေရာ ထားထားမှာ အိပ်ရာဝင်တိုင်း စိတ်ကူးထဲ၌ စန်းလွင်၏ အလိုးကို ခံကြည့်စမြဲ ဖြစ်သည်..။ တစ်ခါတစ်လေစောက်ရေကြည်များ စိုရွှဲပေကျံနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ လက်ကိုထိုးမွှေရင်းဖြင့် အာသာဖြေခဲ့ရပေါင်းလည်း မရေတွက်နိုင်တော့..။
ယခုတော့ တင်းပြည့်ကြပ်ပြည့် အလုံးအထည်ကြီးနှင့် လက်တွေ့အလိုးခံနေရပြီဆိုတော့ အမယ်မင်း…ဘာဆိုဘာမှ အရသာမခံနိုင်….ကောင်းသည်..။ သိပ်ကောင်းသည်..။ ဆိုတာလောက်ပဲ ခံနေမိပြီး ရှက်စိတ်ကြောင့် အရာရာ ဝေဝါးနေပါပေါ့လား..။
မိန်းကလေး ၇၅ ရာခိုင်နှုံး လိုးရင်နာမည်ဆိုသည်ကို လက်ခံထား၍လားမသိ..။ နည်းနည်းပါးပါး နာလျင်လဲ နာတယ် နာတယ်.. နှင့် သူတို့ ငြီးတွားတတ်ကြသည်..။ စင်စစ်က ဤမျှလောက် နာကျင်ခြင်း မဟုတ်ချေ..။
စန်းလွင်ဂွေးစိကြီးက ဂွေးပြင်းကျ.. တွဲကျနေသည်က တထွေးကြီး..။ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ဂွေးစိက ထားထားဖင်ဖြူဖြူကြီးကို သွားပြီး ရိုက်ရိုက်မိလေသည်.။ ဤသို့ ဂွေးဥကြီးက လွှဲရိုက်နေသည်ကလည်း ထားထားအတွက် ကာမစိတ်အရှိန် တိုးမြှင့်ပေးစေသည်..။
စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံး အီစိမ့်ပြီး အကြောပေါင်းတစ်သောင်းခြောက်ထောင်ကို ကာမအရသာ ပေးနိုင်သော လီးကြီးမှာ စွဲမက်စရာ ကောင်းနေသည်..။ လီးကြီးအဝင် အထွက်မှန်လာသလို ထားထားကလည်း စောက်ခေါင်းအတွင်း နေရာမလပ် ထိုးမိစေရန် ဖင်ကြီးကို ဘယ်လူးလိုက် ညာလှိမ့်လိုက် ခံပေးတတ်လာသည်..။ တစ်ခါတစ်ရံ ထုတ်ခနဲ ထိုးမိလိုးမိလိုက်သော စောက်ခေါင်းထဲမှ အရာတစ်ခုကြောင့် မျက်တောင်လေးများ မှေးခနဲ ပြိုဆင်းပိတ်ကျသွားတတ်သေးသည်..။
နာတာအောင့်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ.. ကျင်ခနဲ သေးပေါက်ချင်စိတ် ဖြစ်လာစေသော ခံစားမှု ဖြစ်သည်..။ စန်းလွင်မှာလည်း ဤသို့ (ဘာမှန်းမသိသော) အဖုအထစ်ကလေးကို လီးထိပ်ဖြင့် မှန်း၍ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လိုးနေရသည်ကို အရသာတွေ့လာသည်.။
အတန်ကြာ ညှောင့်လိုးနေရာမှ စန်းလွင်က ထားထားခြေနှစ်ချောင်းကို စေ့ကပ်ပြီး တန်းတန်းစင်း ချလိုက်သည်..။ လီးကိုမူ မချွတ်ပဲ ခြေနှစ်ချောင်းကျော်၍ ထားထားကိုယ်ပေါ်သို့ ကန့်လန့်ဖြတ် (ကြက်ခြေခတ်) ပုံစံမျိုးဖြင့် မြေကြီးပေါ်တွင် လက်ထောက်ကာ တစွတ်စွတ် ဆောင့်လိုးနေလေသည်..။
ဒူးထောင်ပေါင်ကားလိုးသကဲ့သို့ မထိသော်လည်း လီးအဝင်အထွက် မြန်ဆန်လွန်းသည် ။ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ သိမ့်သိမ့်ခါပြီး စန်းလွင်ဆီးခုံကြီးနှင့် ဖိကပ်လိုက်တိုင်း ဘေးသို့ပြားပြီး ကားကားသွားလေသည်..။
လီးကြီးမှာ အဆုံးအထိ စိုက်ဝင်သွားပြီး .. သားအိမ်နှုတ်ခမ်းကိုသာ အဆုံးထောက်မိလေသည်..။ ထိုသို့ အတန်ကြာလိုးပြီး စန်းလွင်က ထားထားနို့ကြီးနှစ်လုံးကို စုံကိုင်ကာ ဆန့်ထားသော ထားထားပေါင်ကြီးများပေါ်၌ ဖင်ထိုင်ကာ ဆောင့်ကြောင့်အနေအထားဖြင့် ဒလစပ် ဆောင့်လိုးလိုက်ပြီး သုတ်ရေများကို ထားထားစောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ပန်းသွင်းလိုက်ရာ.. နွေးခနဲ နွေးခနဲ ပူဆင်းသွားသော စန်းလွင်သုတ်ရေများနှင့် အပြိုင် ထားထားကလည်း ပြစ်ချွဲသော သုတ်ရည်များကို အားပါးတရ ပန်းထုတ်ခါ စိုက် စိုက်ဝင်လာသော လီးကြီးကို အောက်မှ တဆတ်ဆတ် ကော့တင်ပစ်ဆောင့် လိုက်လေတော့သည်…။
“ ရှင်…ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကြိုးစား ကြိုးစား ကျမကို လုံးဝပြန်ပြီး ဆက်လို့ရလိမ့်မယ် မထင်ပါနဲ့..ကိုရဲလင်း…”
“ ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်ရက်စက်ရတာလဲ..ချာတိတ်ရယ်…”
“ အဟင်းဟင်း….မိန်းမတွေ ပေါပါတယ်…ကိုရဲလင်း ကျမတစ်ယောက်ထဲ ဒါပါတာ မဟုတ်ဘူး… ကျမ ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ…”
ညိုသီက သူမပေါင်ကြားသို့ မေးဆတ်ပြရင်းပြောလိုက်သည်..။ အော်…စော်ကားရက်လေခြင်း…။
“ ဒီမှာ ညိုသီ…အချစ်နဲ့ကာမကို မင်းဘယ်လို နားလည်နေလဲ..ဟင်..”
“ ရှင်တို့ ချစ်တယ်ဆိုတာ လိုးဖို့ပဲ မဟုတ်လား…ကာမစပ်ယှက်တာကို ဖုံးကွယ်ပြီး ပြောနေကြတာပဲ မှုတ်လား…”
“ တော်တော့ ညိုသီ….သိပ်လှတဲ့ မင်းပါးစပ်က ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့ စကားတွေ ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ငါမထင်ခဲ့မိဘူး..ငါ ချစ်တာက ညိုသီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး..၊ ဒါပဲ…စောက်ပတ်ပါရင် ပြီးစတမ်း လီးပါရင် ပြီးစတမ်း ဆိုရင် ဒီနေ့လူ့လောကမှာ သူ့ကိုပဲ လက်ထပ်မယ် ၊ ဟိုလူနဲ့တော့ မယူဘူး..ဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေ ဘယ်ရှိကြတော့မှာလဲ…”
ကျနော် စကားကို အပေါက်အလမ်းတည့်အောင် မနည်းကြိုးစား ပြီးပြောနေရသည်..။ အထင်တကြီး အမြတ်တနိုး ထားခဲ့ရသော ညိုသီ၊ များစွာ အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသော စကား ပြောထွက်ရက်ပြီပဲ…။ ရက်စက်ယုတ်မာသော အတွေးအခေါ် အညစ်အထေးများဖြင့် ရစ်ပတ်ဖုံးလွှမ်းနေသော သင်းတို့မောင်နှမသည် ကျနော့်အား ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ပေးခဲ့ကြသည်…။ လူ့လောက မှ ကျနော် ထွက်ခွာသွားခဲ့လျင် သူတို့ ရီမောကြလိမ့်မည်၊ ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်…။ ချစ်ခဲ့သလောက် ရက်စက်ပြလိုက်ပြီပဲ ညိုသီ..။
မိုးရိပ်တွေ တက်လာနေသည်..။ မိုးသက်လေကလည်း စနေထောင့်မှ အပြင်းချီတက်လာနေသည်..။ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် မပါသဖြင့် ဆံပင်တို့က လေမှာ ဝဲလွင့်နေသည်..။ ကျောက်ရေတွင်း ဂဝံကုန်းထက်၌ ဆူဇူကီး ဆိုင်ကယ်လေးကို စက်နှိုး၍ ချောက်ကမ်းပါးဘက်သို့ ဦးတည်ထားသည်..။
အပေါ်စီးမှ နေ၍ မြောက်ဥက္ကလာဘက်ရှိ ရပ်ကွက်များကို မြင်နေရသည်..။ ဟိုးအဝေးမှာ လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းတွေ…။ ကျနော့်မျက်ဝန်းမှာတော့ မျက်ရည်ပူတို့ အိုင်ထွန်းနေသည်..။ မိုးသည်းသည်းထန်ထန် ရွာလာသည်..။ ဆိုင်ကယ်စီးလေ့ကျင့်ရင်း ကျနော်… ချောက်ထဲသို့ ကျပြီးသေပြီဆိုသော သတင်းကို ကြားလိုက်လျှင် ညိုသီ ပျော်သွားလိမ့်မည်..။ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး ခုန်ကာ ခုန်ကာ ပျော်လိမ့်မည်..။ ပျော်ရစ်တော့…အချစ်လေးရေ…။
ဝူးကနဲ စက်ရှိန်ကို မြှင့်…ကလပ်ကို ဆွဲညှစ်ပြီး ဘယ်ခြေထောက်က ဂီယာ ဖိနင်းလိုက်သည်..။ ဝူး….ဝေါ….ကနဲ ဆိုင်ကယ်လေးက မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်နှယ် ကစုန်ပေါက် ထွက်သွားသည်..။ ပြေးလမ်းက ကုန်းလျော ဝေသီမြင့်မားသော ချောက်ကမ်းပါး ထိပ်မှ ဂျိုးဖြူရေပိုက်ကြီးများ ရှိရာ ဘက်သို့ စက်ကုန်ဖွင့်ရင်း မောင်းချလိုက်သည်..။ ချောက်ကမ်းပါးသည် တမုဟုတ်ချင်း နီးကပ်လာသည်..။ ကျနော် ဆက်ကင်းဂီယာကို နင်းလိုက်ပြန်သည်..။ လေးညှို့မှ လွှတ်လိုက်သော မျှားတစ်စင်းပမာနှယ်..။ ပျော်ရစ်တော့….မင်း ပျော်ရစ်တော့ ညိုသီ…။
“ ဝှစ်…ဝှီး…..ဟာ…..” တုံ့ဆွဲခြင်း ခံလိုက်ရသော ဝေဒနာ….။ ပြီးနောက် ကျနော့်ဆိုင်ကယ်လေး လေမှာ ပျံဝဲ ထွက်သွားသည်…..။
“ မင်း .. ဒီလောက်တောင် ဖွန်ကြောင်ရသလား ရဲလင်းရာ…ဟင်…”
“ သီဟ သာ မပါရင် မင်း ကာလနာတိုက်နေပြီ… သိလား.. သီဟ ဆိုင်ကယ်စီး ကျွမ်းလို့ နို့မို့ဆိုရင် နှစ်လက်မလောက်လေး အချိန်အဆ လွဲသွားတာနဲ့ အားပါးပါး မတွေးရဲဘူး… ရဲလင်း…”
ကျနော် မြက်ခင်းပေါ်၌ လဲကျနေသည်..။ ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို တစ်ဦးချင်း ကြောင်စီစီ လိုက်ကြည့်နေမိသည်..။ ကျော်ဝေ၊ မမနွယ် ၊ စန်းလွင် ၊ ထားထား ၊ သီဟ ၊ စောစန္ဒာ ၊ ညိုသီ… မီးခဲမလေ ညိုသီ…။
“ မောင့် ဆိုင်ကယ်ကို ဘေးတိုက်ဖြတ်ပြီး အစ်ကိုသီဟ က မောင့်ကို ဆွဲချလိုက်တာ..သိရဲ့လား ..သိရဲ့လား အချစ်သူရဲကောင်းကြီး…ဟွန်း…သူများကို စိတ်ဆင်းရဲရအောင် သိပ်လုပ်ချင်နေတယ်…”
ကျနော့်ပခုံးကို ဆွဲ ဆွဲဆောင့်ပြီး ညိုသီ အော်သည်..။ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝိုင်းလို့…ခြေထောက်ကလေး ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ လုပ်ပြီး အော်သည်..။
သီဟက ဒူးထောက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကို ချွတ်ကာ မေးသည်..။
“ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး…ခေါင်းထဲ နည်းနည်းမူးသွားရုံပါ….”
“ အေး…ရူးသွားတာ….ကွ…မင်း…..ငါ တယ်ကွာ…တောက်….”
ကျော်ဝေက ကျနော့်ကို ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ချင်လောက်အောင် ဒေါသဖြစ်နေသည်..။
“ အို…ကျော်ကလဲ…လာပြန်ကြမယ်…လာ…လာ….ကိုရဲလင်း…မနွယ်တို့ ပြန်မယ်နော်…”
“ ထားတို့လဲ ပြန်မယ်လေ…အစ်ကို….”
ကျော်ဝေနှင့် စန်းလွင်တို့အတွဲများ ဟွန်ဒါ ဆိုင်ကယ် အသီးသီးပေါ်တက်ခါ မောင်းထွက်သွားကြသည်..။
“ မင်းတို့….ဒီယမဟာ ကို စီးခဲ့ကြ…ငါနဲ့ စန္ဒာ မြောက်ဥက္ကလာကို ဒီလမ်းက ဖြတ်သွားရအုံးမယ်… ကိစ္စရှိလို့….၊ .. ညီမလေး မြန်မြန်ပြန်ကြနော်…မိုးတွေမိပြီး ဖျားနေအုံးမယ်….ငါ..သွားမယ် ရဲလင်း…”
ကျနော် ဘာမျှ နားမလည်သလို..ခေါင်းကိုသာ ငြိမ့်ပြလိုက်သည်..။
ညိုသီ ကျနော့်ပခုံးကို လှုပ်ပြီး ခေါ်သည်..။
ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ဆင့် ခေါ်ပြန်သည်..။
“ ကြည့်ပါလား…သူများ … ငိုမှာ..နော်….ဟင့်…”
ညိုသီ တကယ်ပင် မျက်ရည်များ ရစ်ဝဲလာသည်..။
“ မောင်….ညိုသီ့ကို မုန်းသွားပြီလား……ဟင်…”
ညိုသီ့ အသံက စိုးစိုးရိမ်ရိမ် တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်…။
“ ညိုသီ့ကို မုန်းဖို့ မောင့်မှာ ခွန်အား မရှိပါဘူး…ခလေးရယ်…”
“ သွားပါ…ဟိုနေ့က တကယ် မုန်းသွားပြီးတော့…ဟွန်း…. ၊ အဲဒါလေ….ကိုကျော်ဝေကြီးက ပြောခိုင်းလို့ ပြောတာ…ဟာကို…၊ သူများကို ထားခဲ့တော့ ဘယ်လောက် ငိုခဲ့ရတယ် မှတ်လဲ.. သွား….မောင် မကောင်းဘူး..၊ ညိုသီ .. အဲဒီလောက် မောင့်ကို ပြောမလား…လို့..”
ကျနော် ..ထကာ သီဟ၏ ယမဟာ ဆိုင်ကယ်လေးကို ခွထိုင်လိုက်သည်..။ ညိုသီက နောက်မှ ကယ်ရီယာပေါ်၌ အိကနဲ တက်ထိုင်သည်..။
“ အခုနေ…နှစ်ယောက်စလုံး ချောက်ထဲ ထိုးဆင်းမလား ညိုသီ…”
ညိုသီက မျက်နှာလေး ငုံ့၍ ပြုံးစူစူလေး ပြောလိုက်သည်..။
“ မောင်နဲ့ လိုက်မသေရဲ လို့လား….ညိုသီ…”
“ မောင်နဲ့ ချစ်လို့မှ…… မဝသေးတာ….”
“ အရင် နေရာလေးလား…ပထမဆုံး စပြီး…………..”
“ သိဘူး…….အို…နားရှက်စရာတွေ သူပြောအုံးမယ်…ဟွန်း….”
ကျနော် တဟားဟား ရယ်ပစ်လိုက်ခါ ဆိုင်ကယ်လေးကို မောင်းထွက်လာသည်..။ ညိုသီနှင့် စပြီး ချစ်ခဲ့ရကြသော ချိုင့်ဝှမ်းလေးနားအရောက် …ဆိုင်ကယ်ကို စက်သတ်ပစ်လိုက်သည်..။
ဂျင်းစကပ် ခါးပတ်လေးကို ကျနော် ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်..။
“ ဟာ….အဝတ်တွေ မချွတ်နဲ့မောင်ရာ…မလုပ်…..ပါ…နဲ့….မောင်…ရ…”
ကျနော် နားမထောင်ပါ…။ အပေါ်အင်္ကျီ ဘလောက်စ်လေးကိုလည်း ခေါင်းပေါ်မှ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ဖြူဝင်းအိစက်သော အလှရတနာလေး နှစ်လုံး ခါရမ်း ပြီး အံကျလာသည်..။ ညိုသီ လက်ကလေး ပိုက်လိုက်ရင်း….
“ လုပ်ပြီ…ကြည့်ပါလား….မောင်နော်…..ပြောလို့လဲ မရဘူး…”
အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းနေသော ညိုသီ့ ကိုယ်လုံးလေးအာ မိုးပေါက်ကလေးများက ပက်ဖြန်းပေးနေသည်..။ ကျနော် .. စကပ်လေးကို ထပ်မံ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်…။
“ အိုး….ဒုက္ခပါပဲ…မောင်…..ဆိုးတယ် … ကွာ….”
ဖြူဝင်းဖောင်းမို့နေသော ပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကို လက်အစုံဖြင့် ခြုံသိုင်းယှက်နွယ်လျက် ကြက်ခြေခတ်လေး ဖက်ထားပြီး ကျနော့်အား ကိုယ်တစောင်းလေး အနေအထားဖြင့် တင်ပါးကြီးများကို လိမ်ကာလှည့်လိုက်ရာ ဂွမ်းဆိုင်ဂွမ်းခဲကြီးပမာ ဖွေးဥနေသော တင်ပါးကြီးများ သေးကျဉ်းသော ခါးလေးမှ ကားစွင့် တုံအိနေပြီး ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်းက ကာမစိတ်များကို တရှိန်ရှိန် တောက်လောင်လာစေသည်..။ သူမ၏ လိင်အင်္ဂါလေးကို ညှပ်ထားလိုက်သည်..။
မို့မောက် ဝင်းလက်သော ဆီးခုံလေးက ပခုံးသား လက်မောင်းသားတို့ထက် သာ၍ပင် ဖြူဖွေး ပြီး ဥနေပေရာ စောက်မွှေးလေးများမှာ ပိန်းပိတ်စွာ နက်မှောင်နေပြီး အရောင်လေးများပင် တဖိတ်ဖိတ် လက်ထနေလေသည်..။
မျက်လုံးဝိုင်းလေး ချာချာလည်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြောက်လန့်တကြားလေး လှည့်ပတ်ကြည့်နေရှာသော ဟန်ကလေးက ငိုမဲ့မဲ့ အသွင်လေး ဆောင်နေသည်..။ မြယာပင်ခြုံများ၊ ကြိမ်ပင်များက ကျနော်နှင့် ညိုသီတို့ ရှိနေရာ ချိုင့်ဝှမ်းလေးကို ဘေးပတ်ပတ်လည်မှ လုံခြုံစွာ ကာရံပေးထားလေသည်..။
မင်္ဂလာဒုံ .. ရန်ကုန် ကားလမ်းမကြီးနှင့် ကားသံ သဲ့သဲ့လေးမျှ ကြားရရုံ ကွာဝေးသည့်နည်းတူ အရှေ့ဘက်တွင် ကျောက်ရေတွင်း ရပ်ကွက်ကလည်း ဤနေရာသို့ ခြုံထူထပ်သောကြောင့် လူအရောက်အပေါက် နည်းလှပေသည်..။ တောင်ဘက်၌ ပြန့်ပြူးသော ဂေါက်ကွင်းက အိနြေ္ဒကြီးစွာ ကျောခိုင်းထားပြီး မြောက်ဘက် မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းကြီးမှာလည်း ဆာဟာရ ကန္တာရကြီးနှယ် မျက်စေ့တဆုံး ရှင်းလင်းတိတ်ဆိတ်လို့ နေသည်..။
တိုင်းတံမျက်စီးပင် အချို့သာ လေမှာ မိုးနှင့်အတူ ယိမ်းကနေကြသည်..။
ကျနော်ကလည်း ကလေးပမာ အင်္ကျီဘောင်းဘီများကို ချွတ်၍ နွေးထွေးသော ညိုသီ့ကိုယ်လုံးလေးကို မိုးရေစက်များဖြင့် ရောထွေးကာ အားရပါးရကြီး ဖက်လိုက်ရာ.. ညိုသီကလည်း ကျနော့်အား ဟေ့ကနဲ အော်ရင်း ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ပြန်ဖက်လိုက်လေသည်..။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲသို့ ရောက်နေသော အာဒံနှင့် ဧဝ အလား အဝတ်ဗလာဖြင့် မိုးရေများအောက်တွင် မြူးတူးနေမိကြသည်..။ ကျနော့်လက်ကြီးများက ညိုသီနို့ကြီးများကို၎င်း၊ စောက်ဖုတ်လေးကို၎င်း၊ ကိုင်လိုက် နှိုက်လိုက် လုပ်နေသကဲ့သို့ပင် ညိုသီ၏ ဖြူဖွေးပျောင်းနွဲ့သော လက်ကလေးများက ကျနော်၏ မတ်တောင်နေသော လိင်တန်ကြီးကို ဆုတ်နယ်ဖြစ်ညှစ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆော့နေမိကြပြီးမှ….။
ဟု ညိုသီက လီးကြီးကို ကိုင်ကြည့်ရင်း ရင်ခုန်သံလေးဖြင့် ပြောလိုက်လေသည်..။ ထိုအခါမှ ညိသီအား ဂမူကလေးတစ်ခုပေါ်တွင် ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်စေလိုက်သည်..။
“ မောင်ကကွာ…လုပ်လိုက်ရင်…အဆန်းပဲ…မြန်မြန်လုပ်ကွာ…သူများ ရှက်တယ်.. မတော်တဆ တစ်ယောက်ယောက်များ တွေ့သွားရင် သေဖို့ပဲ ကောင်းတော့မယ်..”
သူမ ဝသီလေးအတိုင်း တတွတ်တွတ် ရေရွတ်ရင်း တောင်ကမူလေးပေါ်၌ အင်အင်းပါသကဲ့သို့ ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်လိုက်လေရာ.. စောက်ဖုတ်ကလေးမှာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး ပြဲအာသွားလေသည်..။ ထိုအခါ…ကျနော်က လီးကြီးကို ညိုသီ့မျက်နှာလေး ရှေ့တွင်ပင် အသာအယာဖြဲကာ စောက်ပတ်အဝလေးသို့တေ့ရင်း ဗြစ်ကနဲ ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်..။
သူမလက်အစုံက ကျနော့်ခါးကို စုံကိုင်ရင်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို ပါးလေးအပ်ကာ ညီးတွားလိုက်ရှာသည်.။ ပြန့်ပြူး ဝင်းလက်နေသော အနာရွတ်လေးများ ကင်းစင်သော ကျောပြင်လေးပေါ်သို့ မိုးရေစက်များက ခုန်ပေါက် ကျေရာက်နေသည်.။
နှစ်ယောက်စလုံး၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ အငွေ့များ တရှိန်းရှိန်းထွက်နေရာ ကာမမီး အပူရှိန်သည် သဘာဝအအေးဒဏ်ကို ထူးထူးခြားခြားကြီး တွန်းလှန်ကာကွယ် ပေးနေလေသည်..။
“ မောင့်ဟာကြီးက သံချောင်းကြီး ကျနေတာပဲ…နော်….မောင့်….”
အမှန်ပင် ကျနော့်လီးကြီးမှာ မာတောင်ပြီး စောက်ခေါင်းလေးထဲ၌ ပြည့်ကြပ်နေပေရာ ညိုသီ့ဖင်ကြီးမှာ ကြွတက်လာပြီး မကုန်းမကွလေးဖြင့် တဟင်းဟင်း ညီးနေပြန်ပါသည်..။
ကျနော်က နားဝ၌ ကပ်လျက် ကြင်နာစွာ မေးလိုက်သည်..။
“ ဟင့်အင်း….နာတာ မဟုတ်ဘူး..မောင်ရဲ့…ကြပ်တာ…အင့်….မောင့်ဟာကြီးက အရင်ကထက် ပိုကြီးနေသလိုပဲကွယ်…သူများဟာလေးထဲမှာ ပြည့်သိပ်နေတာ…ဟင့်..ဟင့်…..အင်း……”
ကျနော့်လက်များက ဖြူဖွေးတင်းကျစ်နေသော ညိုသီ့ဖင်ကြီးကို တရွရွလေး ပွတ်ပေးပြီး တဖြေးဖြေး ဖင်အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ လက်ချောင်းများဖြင့် ထည့်သွင်း ပွတ်ပေးနေသည်..။
ညိုသီက ကျနော့်မျက်နှာကို မကြည့်ပဲ ကျနော့်ကိုယ်လုံးကို ပါးလေးဖြင့် ကပ်ခါ မောနေသော အသံလေးဖြင့် ပြောလိုက်လေသည်..။ ကျနော့်လက်တစ်ဖက်က လုံးဝန်းတင်းပြောင်နေသော ညိုသီ့ဖင်ကြီးကို အောက်မှ ပင့်ကာ ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ညိုသီ့စောက်ဖုတ်လေးမှာ ရှုံ့ကနဲ တွန့်သွားပြီး ဆတ်ခနဲ ဖင်ကြီး ကြွသွားလေသည်.။ ထိုအခါမှ ရပ်ထားသော လီးကြီးကို အလိုက်သင့် ပြွတ်ကနဲ ဖိသွင်းလိုက်လေသည်..။
“ အိ…အ…..အမလေးလေး…မောင် ….ရယ်……”
သေလုမျောပါး အသံလေး တစ်ချက်ညီးရင်း ကျနော့်ခါးကို တင်းတင်းကြီး ဖက်လိုက်ပါလေသည်.။ သုံးလေးချက်မျှ ဤသို့ပင် စအိုလေးကို နှိုက်လိုက် ဆောင့်လိုးလိုက် လုပ်ပေးလိုက်ရာ ညိုသီ တောင်ကမူလေးထက်တွင် ဆောင့်ကြောင့်လေး ဖြစ်သွားလိုက် ကွတတ ကုန်းတုံးတုံးလေး ဖြစ်သွားလိုက် နှင့် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေရှာသည်..။
ထို့နောက်မှ မြက်ခင်းပေါ်တွင် ကျနော်က ပက်လက်လှန်ချပြီး ညိုသီအား တက်ခွလိုးခိုင်းလိုက်သည်..။
“ ရှီး…အ……..ကျွတ် …စောက်ပတ်လေးတော့ ကွဲပြန်ပြီထင်တယ်…မောင်ရယ်… အီး….အင့်….အ..နာလိုက်တာ …ကွယ်…..”
နာလိုက်တာဟု ပါးစပ်က ငြီးတွားသော်လည်း သူမဖင်ကြီးကမူ ဝတ္တရားမပျက် ကြွကာ ကြွကာ ဖိဆောင့်ချနေပြီး…ဝေဒနာကို တွန့်လိမ်ခံစားရင်းမှ… ရှူးရှူး ရှားရှားဖြစ်လာကာ ကျနော့်အား ဂရုမစိုက်တော့ပဲ အတင်း ဒလကြမ်း လေး ဆောင့်လိုးလေတော့သည်..။
ကျနော်က ခါးလေးမှ ကိုင်၍ အောက်မှ ပင့် ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ… ကျနော့်ပခုံးကို ဆိုင်ကယ်စီးသလို လက်ဖြင့် လှမ်းထောက်၍ ကိုင်ရင်း သုတ်ရေများကို ပန်းထုတ်လျက် တပ်လပ်ကြီး ဝင်ထွက်နေသော လီးနှင့် စောက်ဖုတ်အား ငုံ့ကြည့်ကာ တဆတ်ဆတ် ဖိဖိ ဆောင့်ချလိုက်ကာ တင်ပါးကြီးကို ဆတ်ဆတ်လှုပ်ရင်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ မှောက်လှဲချလိုက်တော့သည်..။
ကျနော့်လိင်တန်ကြီးထိပ်မှလည်း တင်းခနဲ ဖြစ်ခါ သုတ်ရေများကို ဇိကနဲ ဇိကနဲ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိလေတော့သည်..။